केवल ज्वरो मात्र होइन, यी ३ लक्षण देखियो भने पनि को’रो’ना हुन सक्छ, हेर्नुहोस्… – Krazy NepaL
May 12, 2021 1546
पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने गरी कोरोना भाइर’स संक्रमणले बिरामीको गन्धको शक्ति र मुखको स्वाद बिगार्दैछ । यद्यपि, त्यस्ता समस्या १५ प्रतिशत बिरामी’हरुमा भइरहेको छ । कोरोना भाइर’सले सबैभन्दा ‘सास फेर्ने क्षमतालाई असर गर्छ।
कोरोना बिरामी बढ्दै छ, यसको’ अन्य प्रभावहरु पनि छन्। भारतमा राज्य दून मेडिकल कलेज अस्पतालको श्वासन रोग विभागका प्रमुख तथा कोरोनाका नोडल अ’फिसर डा. अनुराग अग्रवा’लले भने कि धेरैजसो बिरामीको सामान्य लक्षण हुँदैन।
उनले भने कि कोरो’नाबाट पीडि’त बिरामीहरुमा पनि सुघ्ने शक्ति र मुखको स्वाद हराउने,पखाला लाग्ने भोक नल’गाएको गुनासो छ। यद्यपि यो समस्या १५ दिन सम्म रहन सक्छ ।
डा. अनुरा’गले भने कि यदि चिसो, खो’की, चिसो, ज्वरो, पखाला वा पेट दुखाइ जस्ता समस्या छ भने डाक्ट’रको परामर्श बिना कुनै औषधि नलिनुहोस ।
थप रूपमा, पचा’उन योग्य र पौष्टिक खाना, दाल, ताजा तरकारीहरू राम्रो पकाए पछि मात्र खानुहोस । शरीर’मा भाइरल ज्वरोले पानी कम गर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा सा’मान्य व्यक्तिले पनि दैनिक क’म्तिमा १० गिलास पानी पिउनु पर्छ। भिटामिन सीको साथ ताजा फलफूलहरू पनि खानुहोस्। ताकि शरीरको प्रतिरक्षा मज’बूत रहोस । स्रोत : अमर उज्वाला
Prevके तपाईलाई थाहा छ ? बच्चा जन्माउन उत्तम महिना कुन हो ?
एक पछि अर्को जटिलता थपिदा, प्रचण्ड र ओलि फुट्ने तिब्र स’म्भावना…हेर्नुहोस्।
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23776)